PBS ၏ကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏လူ့မျက်နှာသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » PBS '' BIG အချက်အလက်များ၏လူ့မျက်နှာအချက်အလက်တော်လှန်ရေးသရုပ်ဖော်
Pull Quote - ကလေးဘ ၀ ၏ပထမနေ့တွင်လူသားများမှထုတ်ယူသောအချက်အလက်ပမာဏသည်ကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက်တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များအဆ ၇၀ နှင့်ညီမျှသည်။ BabyCenter.com ၏ဖော်ပြချက်အရယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မွေးဖွားသောကလေးသုံးယောက်လျှင် ၁ ယောက်သည်အွန်လိုင်းမတိုင်မီ (များသောအားဖြင့် sonogram ပုံစံဖြင့်) အွန်လိုင်းရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး အချိန်တွင်ထိုအရေအတွက်သည် ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ပျှမ်းမျှကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခြောက်လခန့်ဖြစ်ပြီးကလေးများ၏ဓါတ်ပုံနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်သူတို့မွေးဖွားသည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းအွန်လိုင်းတွင်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးကတည်းကသေသည်အထိအချိန်နှင့်အမျှကျယ်ပြန့်သော cloud အခြေခံဒေတာဘေ့စ်များတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းနှင့်ထာဝရတည်ရှိနေသောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ခြင်းကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ဘယ်မှာ: ငါတို့သည်ယနေ့ပြုပါနီးပါးအရာအားလုံးကိုတစ်ဦး indelible ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းထွက်ခွာမည်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ရှာပါ။ ကျနော်တို့ကိုဖတ်ပြီးအဘယျသို့။ ကြှနျုပျတို့သညျသှားအဘယ်မှာရှိ။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကိုဝယ်ကြလော့။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပြောပါတယ်။ ဒီဒေတာကိုအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့်သိုလှောင်ထားလျက်ရှိသည်။
Internet-connected data တွေကို devices များလျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် Real-time data တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာ, မြေပုံကူညီပေးနေ, တစ်ဦးချင်းစီကလူ့အာရုံခံကိရိယာဖြစ်လာကြပါပြီရသောဗဟိုဂြိုဟ်အာရုံကြောစနစ်ဖန်တီးနေစဉ်ဂြိုဟ်တိုင်းတာရန်ကူညီပေးနေကြပါသည်၏ကြီးမားသောစုရုံးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသည်တဦးတည်း၏ဘဝရင်းနှီးသောအသေးစိတ်ကိုပုံဖော်။ နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, ဒီဖြစ်စဉ်လေ့ "။ Big Data" အဖြစ်လူသိများသည်ထိုအခါကအရမ်းလူ့ဘက်မကြာခဏသတိမမူသို့မဟုတ်မရေမတွက်သောဤအချက်အလက်များလည်းမရှိ။
BIG အချက်အလက်များ၏လူ့မျက်နှာ, အပေါ်တစ်နိုင်ငံလုံး premiering တစ်ဆုတ်ထားတာအသစ်ကတနာရီကြာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် PBS ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 24 မှာဖေဖော်ဝါရီလ 2016, 10: 00 ညနေ ET (ဒေသခံစာရင်းများစစ်ဆေး) ယခုမျက်မြင်မရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမှတဆင့်လောကထဲကလူတော်တော်များများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု 1,000 ကြိမ် သာ. ကြီးတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းကိုဤကိုလညျးမတားဆီးအင်အားစု၏ကတိတော်နှင့်ဘေးကို examine အင်တာနက်ကိုသူ့ဟာသူထက်။
သရုပ်ဆောင်ယောလ McHale အားဖြင့်အဓိက, ထိုဆုရရုပ်ရှင်တချို့ဖြေရှင်းရန်အလားအလာရှိသည်သောအစွမ်းထက်အချက်အလက်အသစ်ကိုမောင်းနှင်ကိရိယာများ, သရုပျဖျောဖို့ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်ရှေ့ဆောင်သိပ္ပံပညာရှင်များ, လုပ်ငန်းရှင်များ, အနာဂတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကများစွာနှင့်အတူ In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း captivating, ဆွဲဆောင်မှုလူ့ပုံပြင်များ features ကျန်းမာရေး, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, လေထုညစ်ညမ်းမှု, လုံခြုံရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်မှုအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေ၏။
အဆိုပါဒေတာကိုတော်လှန်ရေးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အစဉ်အဆက်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသည်ဘာမှမတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့တိုင်းနှစ်ရက်, လူသားမျိုးနွယ်ယခုနှစ် 2003 မှတဆင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အရုဏ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခံခဲ့ရသလောက် data တွေကိုထုတ်လုပ်နေသည်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ 15th ရာစုဘိုးဘေးတစ်တသက်တာမှာထိတွေ့ခဲ့ကြသည်အဖြစ်တစ်ခုတည်းနေ့၌ကဲ့သို့များများစားစားသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဖုန်းများနှင့် devices တွေကိုသတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ပြီးလူပေါင်းများစွာများအတွက် "On-ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တွင်" အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူ, နည်းပညာအခြေခံကျကျလူတွေအရာအားလုံးနှင့်အတူအပြန်အလှန်လမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်း, ကွန်ပျူတာများ, နေအိမ်များ, ကားများ, ကရိယာများနှင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုအလုံးအရင်း, စုဆောင်းစတိုးဆိုင်နှင့်အချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်ပမာဏကို process ပြီးတော့အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်တုံ့ပြန်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်စကေးအပေါ်ထုတ်ယူနဲ့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုဒေတာထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်တဦးတည်းဓာတ်ပုံနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးအမြော်အမြင်နှင့်အခြားတစ်ဦးဆုရသည် Smolan ကညီအစ်ကိုတွေအကြားထူးခြားတဲ့ပူးပေါင်းခြေတစ်လှမ်း ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ နှစ်ဦးစလုံးယနေ့အရေးအပါဆုံး Impact လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တဦးတည်းယူဆပါသည်တဲ့ဘာသာရပ်အပေါ်အလင်းကိုသွန်းဤ Multi-Platform ကိုမီဒီယာစီမံကိန်းကိုပေါ်တက်ပူးပေါင်းသူကိုထက်ပိုမို 60 features တွေ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်ထိပ်တန်းကွန်ယက်ကိုတီဗီစီးရီး၏။
ဆုရခြင်းဖြင့်ညွှန်ကြားသည်နှင့်ထုတ်လုပ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Rick Smolan, ထိုမော်ကွန်း၏ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်နှင့်ဖန်တီးသူအားဖြင့်နာမည်တူ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးစန္ဒီ Smolan ( "ရာခေလသည်မြစ်", "အဆိုပါနှိပ်ပါ Effect") နှင့် အဆိုပါအသက်တာအတွက်နေ့ စီးရီး, BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ တစ်မိနစ်နှင့်ဧရာနည်းလမ်းတွေနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသှငျအပွငျ permeating တစ်ဦးထူးကဲလှုပ်ရှားမှုအလင်းတစ်အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ခရီးအပေါ်ကြည့်ရှုကြာပါသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အဖြစ်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်သောဂြိုဟ်တု, အာရုံခံကိရိယာနှင့် GPS-enabled ကင်မရာများနှင့်စမတ်ဖုန်းများဘီလျံ, နေ streaming info ကိုသရုပျဖျောကြောင်း State-Of-The-Art Animation နဲ့ဂရပ်ဖစ်သုံးပြီးအချက်အလက်များ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Real-time visualization features ကုန်ကြမ်းအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်ပမာဏ, ခံစားတိုင်းတာနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်စုပေါင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်။ အဆိုပါအံ့မခန်းပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တို့ကို Big Data ရှုမြင်ကြောင်းပုံစံများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာတွေ့နှင့်စနစ်များကိုယခင်ကမသိမမြင်နိုင်သောနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏ရှုထောင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလုပ်လုပ်ပုံကိုရှုပ်ထွေးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
"ကျနော်တို့ကကိုယ့် Big Data အကြောင်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုတစ်စင်းအား၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူဤစီမံကိန်းကိုမ, ဒါပေမယ့်လည်းအချက်အလက်နှင့်အတူအဘယ်သူများ၏အခြေခံလူ့သွင်ပြင်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီထုတ်ပေးသောဒေတာများကိုပိုင်ဆိုင်," ဒါရိုက်တာစန္ဒီ Smolan ကဆိုသည်။ "လောလောဆယ်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်အစိုးရများမဟုတ်ဘဲအဘယ်သူ၏အသက်တာကိုအားလုံးယခုလုပ်ခံရသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့်ထိခိုက်ပါလိမ့်မည်သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းထက်, နည်းပညာ၏တန်ခိုးနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးထင်ပါတယ်။ "
"Big Data အရာတို့ကိုငါတို့အားကြည့်ဖို့တစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလမ်းပေးခြင်းသည်, ဒါကြောင့်ဏု၏အသစ်တစ်ခုကိုကြင်ကြင်နာနာနဲ့တူရဲ့ "Rick Smolan, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူကပြောသည်။ "တစ်ဦးလုံးဝ, တစ်ခုလုံးကိုလူသားမျိုးနွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအားလုံးအတှကျတစျခုမျက်စိမှတဆင့်ရှာဖွေနေခဲ့ပြီးယခုရုတ်တရက်သိပ္ပံပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်တခုအတိုင်းအတာပေးခြင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စက္ကန့်မျက်စိသို့မဟုတ်တစ်တထောင်မျက်စိဖွင့်ဖွင့်ဖို့စွမ်းရည်ကိုပေးစေခြင်းငှါတတ်နိုင်ကြသည်ဆိုပါစို့ အတိမ်အနက်နှင့်ရှုထောင့်နှင့်အတူကြည့်ဖို့နည်းလမ်းသစ်, ငါတို့မတိုင်မီရိပ်မိဘယ်တော့မှနိုင်ကြောင်းညာဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့တွင်အမှုအရာကိုမြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့် 3D ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတစ်ပုံစံ။ "
BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ (အက္ခရာစဉ်အတိုင်း) အပါအဝင်ဒေတာသိပ္ပံ၏လယ်ပြင်တွင် 30 ဦးဆောင်အသံတွေကို, အတုထောက်လှမ်းရေး, နည်းပညာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆေးပညာနှင့်အတူစကားစမြည် features: Linda Avey, 23andMe ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ; လုပ်ငန်းရှင် ယောဟနျသ Battelle ပဒေသရာဇ်မီဒီယာများ၏; ဂျက် Dorsey, Twitter နဲ့ Square ကိုတည်ထောင်သူ, New York Times ကို သတင်းစာဆရာ ချားလ်စ် Duhigg; နာသန်လင်းယုန် Jana နှင့် MIT ကအမျိုး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအကြံပေးနှင့်စာရေးဆရာ မာ့ခ် Goodman; MIT Media Lab ကဒါရိုက်တာ Joi Ito က; အာရုန်သည် KoblinGoogle ကကို Creative Lab ကဒါရိုက်တာ; စာရေးဆရာနဲ့အနာဂတ် တိ O'Reilly; ဂျနီဖာ Pahlka အမရေိများအတွက် Code ကိုအမျိုး, Erik Swan နှင့် ရော့ Das Splunk ၏, ဂျေး Walker က, TEDMED ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး; နှင့်ပိုပြီး။
"Big Data များ၏ခေတ်လူ့သမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည်သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအတွက်အရေးပါယခုအချိန်တွင်ကိုယ်စားပြု: ရုပ်ရှင်ခုနှစ်တွင်ဂျွန် Battelle, Federal မီဒီယာ၏ CEO ဖြစ်သူသူနဲ့အများကြီးကျွမ်းကျင်သူများကယုံကြည်သောအရာကို crystallizes ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရနှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုကံကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်အရေအတွက်ကို။ ဒီကာလအတွင်းကျနော်တို့လုပ်အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များကျနော်တို့အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှစွန့်ခွာလိမ့်မယ်ကမ္ဘာ၏ကြင်နာဘောင်လိမ့်မည် "Battelle, ဖြည့်စွက်" ။ အဘယ်သူသည်ကျွန်တော်ဖန်တီးဒေတာထိန်းချုပ်ကြမည်နည်း အဘယ်အရာကို access ကိုကျနော်တို့ကအစိုးရ၏ပရိယာမှနိုင်ငံသားတွေကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်နည်း ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစ်ဦးက Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုရေးအရသတိထားပလက်ဖောင်းမှနက်ရှိုင်းစွာချိတ်ဆက်အခါကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုအဘယျသို့သောဖြစ်လာလိမ့်မည်နည်း ငါတို့သည်အများကြီးလျော့နည်းထိန်းချုပ်မှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များ-, စွမ်းအင်, ဘဏ္ဍာရေး-ကိုမဆိုနားလည်ရန်အဘို့အလွန်းရှုပ်ထွေးနေကြသည်ကိုတည်ဆောက်နေကြသည်? "
အဆိုပါရုပ်ရှင် Big Data-အပါအဝင်အတွက်အများအပြားထိုးဖောက်အပေါ်လူသားတစ်ဦးမျက်နှာထားရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဥပမာများစွာသောလူကမ်းလှမ်းကျန်းမာရေးနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ဒေတာစုဆောင်းနှင့်မြေပုံကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲမွဲတေမှု, ရာဇဝတ်မှု, မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးနှင့်နိုင်ငံရေးကသောင်းကနင်း၏သံသရာထဲမှာဝဲဒေသများနားလည်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာထုတ်ဖော်ပြသ ။
•ကျွမ်းကျင်သူများကယခင်ကခြေရာခံဖို့ CDC ဘို့ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာလုယူသောထိုကဲ့သို့သောတုပ်ကွေးခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်အမှန်တကယ်အချိန်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု, အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။
•အ bracket က2ရင်သားကင်ဆာဗီဇများအတွက်မိခင်တစ်ဦးနဲ့သမီးစမ်းသပ်ခြင်း၏ဇာတ်လမ်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇ Digitizing, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
•အိပ်စက်ခြင်း, လှုပ်ရှားမှု, ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုခြေရာခံစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့အသစ်ကနည်းပညာပစ္စည်းတွေနဲ့အာရုံခံကိရိယာ၏ပြန့်ပွားတစ်ဦးချင်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်မသာပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သို့စုပေါင်းယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်။
•ဗိုလ်မှူးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကို Big Data-အပါအဝင်ကြီးမားတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့အကျိုးအမြတ်မယူအဖွဲ့ကခြေရာခံများနှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရသောကင်ညာ-in ကိုငှက်ဖျားဟော့စပေါ့များကကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်မှု 25 ကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 2000 ရာခိုင်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်။
•ဘော်စတွန်မှချီကာဂိုမှနယူးယော့ခ်ကနေမြို့ကြီးများအနာဂတ်မှာ-ကွားစနစ်နှင့်အကူးအပြောင်း, အသွားအလာနှင့်လမ်းဖောက်ပေးလိုက်တာကနေရာဇဝတ်မှုတရားမျှတမှုအရာအားလုံးအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဒေတာအစုံမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များကိုဦးစားပေးများတွင်ရေရှည်တည်တံ့လူနေမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော, တုံ့ပြန်မှုသက်ရှိဖြစ်လာရသည်။
•အနေနဲ့ MIT မှသုတေသီတို့ကတစ်ဦးကစိတ်ဝင်စားဖွယ်စမ်းသပ်မှုကလေးများဘာသာစကားဆည်းပူးဘယ်လိုဖော်ပြသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်လည်းအချက်အလက်များ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းမှာကြည့်ရှုသည်။ အက်ဒွပ်စနိုဒင်နှင့် NSA ကစာရွက်စာတမ်းဖြန့်ချိပြသခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတဲ့မတ်စောက်သောစျေးနှုန်းမှာပါရှိပါတယ်။ BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုသိနှင့်အမည်မသိအဖွဲ့အစည်းများမှရက်ပိုင်းများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေး privacy ကို, အစိုးရစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လူထုအခြေပြုလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ဒီမိုကရေစီ၏အနာဂတ်များအတွက်ဂယက်၏ကိစ္စရပ်များကို spotlighting သစ်ဆိုက်ဘာခေတ်၌အကြှနျုပျတို့၏အားနည်းချက်များစူးစမ်း။
BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ စန္ဒီ Smolan အားဖြင့်ညွှန်ကြားထားပြီး Bill Medsker နှင့်စန္ဒီ Smolan ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများက Rick Smolan နှင့်ဂျယ်ရီရှောလမုန်မင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Jacek Laskus အားဖြင့်ရုပ်ရှင်ပညာနှင့်ဖိလိပ္ပု Sheppard အားဖြင့်ဂီတနှင့်အတူ, ဒံယေလ Oberle တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ အလင်းအားအကြောင်းအရာနှင့် CuriosityStream နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အားလုံး & Odds Productions ဆန့်ကျင်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Thefilm Cisco သည်နှင့်သည် SAP ၏ရက်ရက်ရောရောပံ့ပိုးမှုမှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ စီမံကိန်းကို Cisco သည်, SAP, VMware နှင့် FedEx ထံမှနောက်ထပ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ EMC အားဖြင့် underwritten ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.humanfaceofbigdatafilm.com/။ က, Twitter မှတဆင့်ရုပ်ရှင်နဲ့တွဲသုံးအပြန်အလှန်ရန် #BigDataPBS ။
အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြီးသားအများအပြားရုပ်ရှင်ပွဲတော်များမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကရွေးချယ်ရေးအဖြစ်အထူးဂုဏ်ထူးလက်ခံရရှိခဲ့သည်, နှင့်ဘော်စတွန်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ "အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်" များအတွက်ဂျူရီဆုကိုအပါအဝင်ဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဟန်ပြ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကမ္ဘာတဝှမ်းသံရုံးနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာပြသခံရဖို့ရုပ်ရှင်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
ရုပ်ရှင်နှင့်အကောင်းဆုံးရောင်းချခြင်း, ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးစာအုပ်တစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာအပြင်, အပြန်အလှန်, WEBBY Award- အိုင်ပက် app ကိုအနိုင်ရတဲ့, ဒါနရေဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်စေသောတစ်ဦးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကလှူဒါန်းသည့်ဝင်ငွေများ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်း, iTunes ကိုအပေါ်လည်းရရှိနိုင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်လူတို့အားသန့်ရှင်းတဲ့သောက်သုံးရေ။
စန္ဒီ Smolan၏ဒါရိုက်တာ BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာတစ်ဦးဆုရဖြစ်ပါသည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ အဘယ်သူ၏အလုပ် features တွေ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာနှင့် virtual reality ဇာတ်ကားတွေအထိချဲ့ကာ။ မိမိအပြင်းထန်စွာကောင်းချီးပွဲဦးထွက်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, "ရာခေလသည်မြစ်" ဟုအဆိုပါ Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာရန်းဂျူရီဆုများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ခေတ္တများအတွက်အထူးဂျူရီဆုကိုအဘို့ဆုယူခဲ့ပါတယ်။ မိမိအ VR ရုပ်ရှင် "ဟု The နှိပ်ပါ Effect," ပထမဦးဆုံးက New York Times ကိုကအေဲနျဂြီ Doc Virtual Reality ရုပ်ရှင်, အ 2016 Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ premiere လိမ့်မယ်နဲ့ The မက်က်အာဖောင်ဒေးရှင်း Vrse နှင့် Annapurna ရုပ်ပုံများနှင့်အတူပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားညွှန်ကြားရေးမှူးကဲ့သို့, မိမိခရက်ဒစ် "ညီအစ်ကိုညီအစ်မ" နှင့်အပါအဝင်စီးရီး "အလယ်ခေတ်" အဖြစ် 50 ကွန်ယက်ကိုစီးရီးထက်ပိုသည်ကောင်းချီးလေယာဉ်မှူးများပါဝင်သည် "မဟာမိတ်များ McBeal ။ " သူဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် "12 ကျောက်ခဲညွှန်ကြား "နှင့်တစ်ဦး 2015 ဂျိမ်းမုတ်ဆိတ်ဆုချီးမြှင့်ရဲ့စာကိုလက်ခံရရှိသူဖြစ်ခဲ့သည်။
Rick Smolan၏အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ BIG အချက်အလက်များ၏လူမျက်နှာ၏ CEO ဖြစ်သူဖြစ်ပါတယ် အားလုံး & Odds Productions ဆန့်ကျင် နှင့်တစ်ဦး New York Times ကို ပုံနှိပ်၌သူ၏စာအုပ်များကိုကျော်ငါးသန်းမိတ္တူနှင့်အတူရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ။ တစ်ဦးကဟောင်းတဦး အချိန်, ဘဝ နှင့် National Geographic ဓာတ်ပုံဆရာ, Smolan အကောင်းဆုံးများ၏ပူးတွဲဖန်တီးသူအဖြစ်လူသိများသည် အဆိုပါအသက်တာအတွက်နေ့ နှင့် အမရေိ 24 /7စီးရီး။ ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာရာပေါင်းများစွာ၏လုပျငနျး feature နှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art နည်းပညာနှင့်အတူဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းပြောပြပေါင်းစပ်တော်မူသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဓာတ်ပုံစီမံကိန်းများ, မှန်မှန်အပါအဝင်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဂုဏ်သတင်းစာပမြေား၏အဖုံးပေါ်တွင် featured နေကြတယ် Fortune မဂ္ဂဇင်း, အချိန် နှင့် GEO. ဉစ္စာဓန (အားလုံး & Odds Productions ဆန့်ကျင်ဖော်ပြထားတယ်www.AgainstAllOdds.com) "အမေရိကားမှာရှိတဲ့ 25 အအေးဆုံးကုမ္ပဏီများတစ်ခုမှာ။ " အဖြစ်
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တီဗီနည်းပညာ 2016-01-24
ယခင်: Alumni နှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေး၏လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
နောက်တစ်ခု: Presteigne Hogmanay အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပထောက်ခံပါသည်